Maamulka degmada Warta-Nabad oo ka warbixiyay weerar degmada…
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, ku dhowaad tobban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu weeraray guri ku yaala degmada Warta-Nabada ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Ninka oo watay qori AK47 ah isla markaana illaa iyo haatan aanan la aqoon wuxuu yahay waxaa lagu waramay in uu rasaas ooda uga qaaday dhismaha oo ahaa goob Mingiska lagu garaaco kaas oo ku yaalla caasimada wadanka ee Muqdisho.
Gudoomiyaha degmada Warta-Nabada Zeynab Xaabsay oo ay mashaqadaan ka dhacday degnada ay Maamusho ayaa xaqiijisay falkaas, waxa ayna sheegtay in shaqada ka socotay guriga ay ahayd mid dhuumaaleysi ah.
Ciidanka amniga ayaa baaris ku bilaabay ninkii geystay falka iyo sababta keentay dhacdadan.
“Waxaa naloo sheegay in Mingiska laga soo raray qayb kale oo isla degmada ku taala, maantana uu doonayey in uu gurigan cusub ku shaqo bilaabay,” ayay saxaafada ugu sheegay meesha ay wax ka bililiqeysteen.
Ma jirto koox illaa iyo haatan dusha saartay mas’uuliyadda falkaan. Balse, dadka degaanka oo arkay ninka hubeysan waxay sheegeen in ay u maleynayaan in uu ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda oo cabsan.
“Dadkii wax ku noqdey waxaa la dhigay xarumaha caafimaadka, waxaana xaqiiqada lagu ogaan doonaa baaritaanka,” ayay xustay Seynab Xaabseey oo aan tafaasiil ka bixin waxay ahaayeen bukaanadda.
Illo wareedyo dhanka amniga ah ayaa sheegay in ciidamadda goobta tegay ay xabsi u taxaabeen dhamaan shaqsiyaadkii meesha joogay isla markaana ay ku bilaabeen su’aallo waydiin.